Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News]
Myanmar IT Resource Forum » NEWS ZONE » » ပြည်တွင်း IT နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ » Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News]
1 Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 7th May 2010, 1:57 pm
ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများနှင့် ရုပ်သံလိုင်းများကိုပါ ဖမ်းယူကြည့်ရှု နိုင်တော့မည့် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သော Fiber to the Home နည်းစနစ်ကို လာမည့်ဇူလိုင်လ ၀န်းကျင်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တပ်ဆင်ပေးတော့မည်ဟု အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်နေသော ရတနာပုံ တယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ၀န်ဆောင်မှု သုံးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်မည့် အဆိုပါ Fiber to Home စနစ်အား ရန်ကုန်မြို့တွင်း စတင်တပ်ဆင် ပေးမည်ဆိုပါက လူနေ မထူထပ်သော ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာများတွင် ဦးစားပေး တပ်ဆင်ပေးသွားမည်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ “ရန်ကုန်မှာစပြီး ဖိုက်ဘာစနစ်ကို တပ်ဆင် တော့မယ်ဆို လူနေ ထူထပ်မှုသိပ် မရှိတဲ့ အိမ်ရာတွေ၊ ကွန်ဒိုတွေမှာ အရင်တပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်းတွေကို သုံးစွဲမယ့် နေရာဆီ အရောက်ဆွဲဖို့က နေရာတိုင်း သိပ်အဆင်မပြေတော့ လူနေ မသိပ်သည်းတဲ့ နေရာတွေကို ရွေးရတာပါ။ လိုချင်တဲ့ နေရာကို ဆွဲဖို့ကျတော့ လျှပ်စစ်ရုံးတို့၊ ဆက်သွယ်ရေရုံးတို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ရတာဖြစ်လို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြန်ဆုံးရမယ့် နေရာကို ရွေးရတာပါ”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ Fiber to the Home ဟုခေါ်တွင်ပြီး Triple Play Service (နည်းစနစ် သုံးမျိုး ၀န်ဆောင်မှု) ဖြစ်သည့် GPON( Gigabite Passive Optical Network) နည်းစနစ် ဆက်သွယ်မှုအား မန္တလေးတိုင်း အတွင်းတွင်လည်း လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်ခန့်တွင် ၀န်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများကို မေလကုန်ခန့်တွင် ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
2 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 7th May 2010, 9:24 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-29
I have read it, too..
The cost for the fiber is as half-lower as much as the ADSL (about 900,000 ks for configuration).
The first year is free of charge. But, after from the second year, the annually charge is 60,000 ks.
But it's for the Mandalay, I supposed.
3 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 8th May 2010, 12:03 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-09
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 6
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 86
what abt the plans ? umm .. such as .. does it ve any plan like comsumer .. subscriber or enterprise ? & what abt the cost for each plan ?9luks is for installation rite ? i heard that the monthly cost for2MB connection is 30 FEC .. it might be juzarumor ... if u heard any news .. please let'm know
4 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 8th May 2010, 6:27 pm
Sure,... ^_^ But if you want more exactly, you should ask directly to Yadanarpone Teleport.
5 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 9th May 2010, 9:00 pm
Wow! how genious u r .. u can tell exectly whata5 years old child can do .. i'm impress
thanks for using ur brain and answering me ... thanks
6 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 9th May 2010, 9:17 pm
ဒီစနစ်က တကယ်တော့ ရန်ကုန်မှာ ရောက်နေတာတောင် ကြာပြီတဲ့။
ဗိုလ်တထောင်မှာ စမ်းသပ်နေတာ ၂ လ လောက်ရှိပြီဆိုလား။ သတင်းတော့ကြားတယ်။
ပိုက်ဆံ ၁၀ သိန်းလောက် ကောက်ရရင် သွားဝယ်လိုက်မယ်။
Plan အနေနဲ့ကတော့ Speed နဲ့ဘဲ ခွဲခြားထားပါတယ်တဲ့။ ပထမဆုံးမှ ၉ သိန်းလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ နောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာတော့ Annual Fees တော့ ပေးရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
7 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News] on 11th May 2010, 10:01 am
way hay hay ~! ကွတ် တိ ပဲ ကွာ .. Fiber ရ ရင် VoD ပါ ရ မယ် .. home မှာ ထိုင် ပြီးတော့ .. VoD or NVoD ပဲ ကြည့်တော့ မယ်
8 Re: Fiber to the Home ၀န်ဆောင်မှု ရန်ကုန်တွင် ပေးတော့မည် ဟုဆို [Local News]